Mila ovaina ny lalàna : tsy ara-toekarena ny fandrarana ny varotra ombivavy | NewsMada
Mila ovaina ny lalàna : tsy ara-toekarena ny fandrarana ny varotra ombivavy
Tsy eken’ny fikambanan’ny mpiompy omby (Fimpiomby) eto Madagasikara ny lalàna vao navoakan’ny fitondrana mandrara ny fivarotana ombivavy sy ny zanak’omby eto amintsika. Amin’izy ireo, hanapotika ny taranak’omby eto Madagasikara ity fepetra noraisin’ny fitondrana ity, tsy mifanaraka amin’ny lalàn’ny toekarena sady tsy mitondra fampandrosoana sy fampiroboroboana ny fiompiana mihitsy. Ho an’ity fikambanana ity, natao tsy ampiheverana ity lalàna ity, tsy mba nalaina ny hevitry ny mpisehatra voakasika, indrindra ny mpiompy sy ny tantsaha. Mazava ny antony, tsy afaka mividy sy mampitombo ny ombiny ny tantsaha.
Fandrarana ny famonoana
Amin’izy ireo, mila ovaina haingana ity lalàna vaovao ity. Tokony hatao ny fandrarana ny famonoana ny ombivavy fa tsy ny fivarotana azy. Ekena ny tsy hamonoana ny ombivavy sy ny hivarotana ny henan’omby vavy, fa tsy mifanaraka amin’ny fampitomboana ny taranak’omby kosa ny tsy fivarotana na tsy ahafahana mividy ombivavy sy ny zanak’omby.
Matetika ny trangan-javatra ataon’ny fitondrana tsy mijery lavitra sy tsy ampandinihana lalina toy izao. Anisan’izany ny fandrarana ny tsy fampiasana ny fonosana plastika, latsaky ny hatevina 5µ, satria lazaina fa manimba ny tontolo iainana, manentsina ny lakan-drano sy ny tatatra. Tsy nahavaha olana izany satria vao mainka aza nihanatevina ny fonosana plastika novokarin’ny orinasa sady nihalafo koa ny vidiny. Sa izay fampiakarana ny vidim-piainana izay mihitsy ny tian-katao?